Maleeshiyaatka Khaliif Xiftar Oo Dad Shacab Ku Xasuuqay Liibiya. – Calamada.com
Maleeshiyaatka Khaliif Xiftar Oo Dad Shacab Ku Xasuuqay Liibiya.
calamada July 24, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya wadanka Liibiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka dagaal Oogaha daaquudka Khaliifka Xaftar ay xasuuq daran ugeysteen dad shacab ah oo ku sugnaa magaalada Benghazi ee bariga wadankaasi dhacda.
Meydadka illaa iyo 21 qof oo madaxdyada laga guray ayaa xalay fiidkii lasoo dhigay xaafadda Al-leythi ee bariga magaalada Benghazi.
Meydadka oo jirdkooda ay ka muuqdeen astaamo tacdiibin ah ayaa madaxyada rasaas looga sharnaqay sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah.
Maleeshiyaadka dagaal oogaha khaaâ€™inka ah Khaliifka Xaftar ayaa la rumeysanyahay in xabsiyada ay kalasoo baxeen dadka muslimiinta ah oo ay ku eedeeyeen in ay taageersanyihiin xoogaga kacdoon wadayaasha Liibiya iyo Mujaahidiinta Ansaaru shareecah.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Meydadka dadka la xasuuqay lasoo dhigay goob qashin qub ah, jamaacada Saraaya Difaac ayaa ku goodisay in ay ka aargudan doonto xasuuqa lagula kacay dadka ku dhaqan magaalada Benghazi.
Xasuuqan ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka Xifter ayaa imaanaya maalmo kadib markii dagaallo ka dhacay Bariga Liibiya cadawga si xun loogu jebiyay islamarkaana dhulka lasoo dhigay diyaarad melleteri oo ay saarnaayeen sedax sarkaal faransiis ah.
Qeybaha kala duwan ee shacabka Liibiya iyo hoggaamiyaasha siyaasadda ayaa cambaareeyay xasuuqa cusub ee ka dhacay magaalada hareeraysan ee Benghaazi oo sedaxdii sanadood ee lasoo dhaafay hardan xooggan uu ka socday.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 19-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 19-10-1437 Hijri.